Nnyocha ụlọ ọrụ - OUZHAN TRADE (SHANGHAI) CO., LTD
Ouzhan Trade (Shanghai) Co., Ltd. emi odude ke Building 38, Jinguo ulo oru ogige, Nke 500 Zhenkang ụzọ, Jinshan district, Shanghai, anyị nwere ihe karịrị afọ 15 nke ọkachamara CNC machining ahụmahụ na Shanghai, tumadi na CNC-egwe ọka, CNC ntụgharị, Ntugharị-igwe milling, CNC machining, 4/5 axis CNC machining, Elu egweri, Laser ọnwụ, Mpempe akwụkwọ metal ịgbado ọkụ na na. Companylọ ọrụ anyị na-ekpuchi mpaghara nke mita 1,200, ọnụ ọgụgụ ndị ọrụ bụ ihe dị ka 30, ndị njikwa teknụzụ 10, ndị nyocha 5 dị mma. Main mmepụta ngwá karịa 30 tent.
Akụkụ nke igwe CNC
1. Ihe ndị a ma ama nke CNC machining
Ọ dị mkpa iburu n'uche ebe a na ngwaọrụ ndị na-arụ ọrụ CNC na-ejikarị njide ngwaọrụ na-akpaghị aka na-achịkwa ya. N'ihi ya, o doro anya na usoro ọrụ na-etinyekwu uche na okike. Na igwe CNC niile, a na-arụ ọrụ nyocha elektrọnik na mpaghara ọ bụla na-achịkwa. A na-ejikarị usoro ntụgharị atụ arụ ọrụ na igwe CXNC maka ịmata ọnọdụ nke slide na slideway.
Usoro ndị a na-arụkwa ọrụ dị oke mkpa n'ịhazi tebụl spindle na ịtụ ezigbo ọsọ spindle. Njikwa CNC bụ isi ihe eji arụ ọrụ CNC. Emepụtara njikwa CNC ọhụụ maka ngwa dị mfe metụtara ịtụgharị igwe ọrụ yana egweri. N'aka nke ọzọ, njikwa ọnụ ọgụgụ kọmputa dị elu na-enye ohere ịchịkwa nkenke dị iche iche nke anyụike dị iche iche, na-enyere ha aka ịkọwa ọnọdụ ọsọ ọsọ. Ya mere, ka anyị lee anya na ụfọdụ ndị isi atụmatụ nke CNC machining.
2. Akpaghị aka lubrication sistemụ
Ọ bara uru ịkọ ebe a na ị nwere ike nweta ntụkwasị obi ogologo oge site na ngwa ọrụ igwe nke na-adabere na nhazi oge niile na usoro mmanu oge niile. Ọ bụ eziokwu a na-ahụkarị na ezughị oke lubrication na biarin ahụ ga-eme ka emebi ha ngwa ngwa. Ọzọkwa, oke mmanu mmanụ nwekwara ike imebi ụzọ egwu. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ọ bụrụ na enweghị mmanu kpamkpam, nkwụsi ike nke igwe ahụ ga-ebelata.
Ọtụtụ mgbe, ịrụzi ụgwọ ndị metụtara igwe CNC dị oke ọnụ. Yabụ, ọ bụ ihe ezi uche dị na ịhọrọ ndị ọrụ CNC ndị ahụ nwere usoro ntinye onwe ha. A na-akpọkwa ya mmanu akpaghị aka, ebe ejiri ngwaọrụ ọ bụla jikọọ ya na etiti dị iche iche. Lubrication dispenser na-akpaghị aka na-enye programmable na pressurized mmanụ oriri ọ bụla amị.
3. Transitivity nke CNC machining usoro dị mma
Mgbe ịmechara ma nyochaa usoro ọnwụnwa nyocha, enwere ike itinye ntụgharị nke igwe CNC iji chekwaa oge dị oke mkpa ma hụ na ọ dị mma n'otu oge ahụ. Ọzọkwa, enwere ike iji usoro ahụ dị ka ndebiri maka nhazi na-esote nke akụkụ ndị ọzọ yiri ya. Yabụ, site na iji atụmatụ ntụgharị nke igwe CNC, arụ ọrụ dịgasị iche iche gafere ụlọ ọrụ nwere ike ịkọwapụta.
4. Spindle nhọrọ na CNC machining
Ma igwe 3-axis na 5-axis CNC igwe nwere ogologo nhọrọ dị iche iche mgbe okwu gbasara mkpịsị ụkwụ. The HSD na Perske spindles bụ ugbua a nnukwu hit na ebe nke CNC machining. Ha na-arụ ọrụ nke ọma ma nwee ike iburu ibu site na ijide ezi ike gị n'otu oge. Ọzọkwa, nfuli agụụ bụ nhọrọ nhọrọ na igwe CNC. Agụụ nfuli-enye ike na nkwụsi ike ka CNC igwe setups.
5. Akpaghị aka ogologo ngwaọrụ setters
Akụrụngwa na-akpaghị aka ogologo setịpụrụ nwere ike ime ka igwe 3-axis na 5-axis rụọ ọrụ nke ọma. Usoro nhazi ogologo bụ nke ziri ezi. Ọzọkwa, ha nwere otu M-Code nke na-eme nhọrọ nke ngwa ọrụ na mpaghara akpaaka. Ọzọkwa, idozi ngwa ọrụ na ọnọdụ nyocha ya nwere ike ịdị mma site na enyemaka nke ndị na-edozi ngwa ọrụ akpaka. Mgbe nyocha ahụ achọpụtala igwe ahụ, a na-echekwa ogologo oge nke ihe eji eme ihe n'otu n'otu na tebụl Fagor.
6. Njikwa Fagor
Njikwa Fagor bụkwa akụkụ dị mkpa nke 3-axis na 5-axis CNC igwe. Agbanyeghị na ọtụtụ igwe CNC ji ọrụ a rụọ ọrụ, ndị nrụpụta ndị ọzọ anaghị etinye ya na igwe CNC. Ọ bụrụ na igwe CNC gị enweghị Njikwa Fagor, ọ ga-akacha mma ịzụta ha n'aka ndị na-eweta ngwaahịa nke atọ.
7. Ọ dị mkpa iji na-agba ọsọ tupu ule tupu ịmalite na n'ichepụta usoro
Iji kpomkwem, Oge ojiri gaa gburugburu ebe obibi nke CNC machining na-ukwuu akpaghị aka. Nke a bụ ihe kpatara na mmadụ kwesịrị ị paya ntị nke ọma na nchekwa na mma. Yabụ, na machining Filiks metụtara CNC ga izute niile arụmọrụ na mmepụta ibiere na a ikpe ule. Ọnwale ule tupu ịmalite na usoro mmepụta ga-azọpụta gị n'ọtụtụ nsogbu.
Uru nke Ouzhan
1. Ouzhan nwere ihe karịrị 30 set nke igwe CNC dị elu, ọtụtụ n'ime ha si Switzerland na Japan, ndị ziri ezi anyị nwere ike iru 0.01mm.
2. Ouzhan nwere ihe karịrị ndị ọrụ 30 ugbu a na ihe karịrị 10% nọ na ogo Nna-ukwu ma ọ bụ Dọkịta. Anyị iri injinia niile gụsịrị akwụkwọ na n'elu Chinese mahadum majoring na ígwè na nwere ọgaranya ọkachamara knowledge.Our mba ọzọ ahia pesonel bụ mba ahia ọkachamara na-agụsị akwụkwọ, na nkà na mba ọzọ ahia process.The abụọ ngalaba nke anyị ụlọ ọrụ nwere ike inyere onye ọ bụla ọzọ na-ewetara gị ihe kasị mma ọrụ .
3. Ouzhan nwere ụlọ ọrụ CNC nke aka ya, ebe ọ bụ na e guzobere ụlọ ọrụ anyị na Shanghai na 2005, anyị ejirila ọtụtụ iri afọ nke ahụmahụ bara ụba na ihe ọmụma na CNC machining ubi iji merie ọtụtụ ndị ahịa. Dị ka Trutzschler, iGuzzini, SafeFire, FujiXerox, Ghrepower, Reco na ihe ndị ọzọ.